TALOOYINKA UGU SARREEYA EE KU SAABSAN XANNAANAYNTA SANDUUQYADA - DHIRTA GUDAHA
Geedka ayaa sidoo kale leh hanti faa'iido leh. Tusaale ahaan, waxay soo saaraa phytoncides - dhexdhexaadiyaha bakteeriyada waxyeellada leh.
Sida loo iibsado seedling yar yar ee dukaanka
Si aad u dooratid geedo yar yar oo sanduuq ah dukaanka, waxaad u baahan tahay inaad ogaatid kuwa ku koray guriga. Gaar ahaan, kuwani waa noocyada sida:
Balearic (dhererka caleen ilaa 4.5 cm);
yar-yareeyay (dhererka caleen ilaa 2.5 cm);
Dheecaan (dhererka caleen ilaa 3 cm).
Si loo abuuro bonsai of boxwood ah, nooca ugu haboon Garland. Wuxuu u dulqaadanayaa timo, iyo sidoo kale isbeddelka muuqaalka adoo isticmaalaya xadhig.
Marka aad iibsanayso, fiiro gaar ah u yeelashada muuqaalka geedka. Caleemaha waa inay ahaadaan cagaar madow, afkoda aan dhicin. Tani waa calaamad u ah warshad caafimaad leh..
Ka hor inta aadan si fiican u soo saar sanduuqa guga, waxaa lagama maarmaan ah in la baaro shuruudaha beerashada. Guriga, sanduuqgu wuxuu u baahan yahay daryeel taxaddar leh oo taxadir leh.
Sanduuqgu wuxuu jecel yahay meesha uu iftiimay, laakiin ma wareejiyo qorax toos ah. Qorraxda qorraxda ka soo baxda caleemaha geedka waxay noqotaa jaale iyo qallalan. Inta badan tani waxay dhacdaa dhamaadka jiilaalka, marka nidaamka xididka uu weli hurudo, caleentuna waxay soo kacdaa qorraxda adag.
Caleemaha ma helayaan qoyaan ku filan oo qallalan, taas oo keenta duufaan duurka ku yaal. Si looga hortago in tan dhacdo, duurka waxay u baahan yihiin inay daboolaan.
Marka heerkulku dhexdhexaad yahay, sanduuqyada qolalka si fiican ayey u koraan. Laakiin xilliga jiilaalka waxay u baahan tahay heerkul ah + 6 ... + 10 ° S. Sanduuqgu wuxuu jecel yahay boos banaan, sidaas darteed xagaaga waa ka wanaagsan inaad qaadatid balakoonka ama barxadda.
Daryeelka banaanbaxa gudaha
Boxwood waa xayawaan aad u furan, sidaas darteed daryeel caafimaad aan habooneyn waxay gabi ahaanba lumisaa caleenta.
Maalmaha kulul, sanduuqyada gudaha waxay u baahan yihiin waraabin badan iyo biyo ku rusheeyaa heerkulka qolka. Tan iyo xididdada sanduuqa ah ha u dulqaadan qoyaan xad dhaafka ah, dayrta iyo jiilaalka waa in la dhimo.
Guga iyo xagaaga waxaad u baahan tahay inaad ku quudiso sanduuq hal mar ah 10-12 maalmood. Waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo bacriminta organic iyo macdanta. Wixii sandwichwood ku habboon bacriminta loogu talagalay for azaleas. Ka hor inta aan samayn timo, waa lagama maarmaan in la quudiyo sanduuqda guga. Tani waxay gacan ka geysaneysaa kicinta koritaanka iyo horumarinta caleenta dhirta.
Tixgeli goorta iyo sida loo gooyo sanduuqa.
Sanduuqyada qolka gawaarida lagu qaado sida loo baahan yahay sanadka oo dhan. Sida dhirtu si tartiib ah kor ugu kacdo, hagaajinta taajka waa in si wanaagsan loo fekero.
Si kastaba ha noqotee, muhiim maaha in laga cabsado geeddi-socodkan. Haddii dhirtaada dhirta si fiican loo rujiyay, waxaad samayn kartaa taaj. Tan waxay badanaa dhacdaa sanadka labaad ka dib markaad degto.
Si aan u bilowno, waxaan go'aamino foomka. Nooc of sanduuqa qurxinta waxaa uu noqon karaa cubic, spherical, conical ama qaab kale oo joomatari ah.
Si aad u gooyso kubbadda ugu fiican, waa in aad marka hore gooyaa "aaladda" iyo 4 "Meridians", ka dibna, diirada saaraya tilmaamahan, sii kaynta si fiican u muuqata.
Sidoo kale ujeedadaas waxaad isticmaali kartaa qaabka birta. Naqshadiisu waxay ka kooban tahay rodol iyo naqshad wareegsan oo ah qaab muuqaal ah oo si xor ah u wareegaya. Udubku wuxuu ku dhajin karaa dhulka meel u dhow buundada sanduuq. Qalajinta caleemaha xad-dhaafka ah, hareeraha qaabka agagaarka geedka.
Waxaa suurtagal ah in la siiyo qaab qaabka birta. Waxa uu saaray geedka ka dib markii laga beerto, gooyay caleemaha ka baxsan xadka. Si loo siiyo qaabka warshad noocan ah waxay leedahay dhowr sano.
Ka dib marka aad buuxiso foomka, mesh biraha ayaa laga saari karaa, timo waa in si joogto ah loo qabtaa. Sida caadiga ah habkan geedka waxaa loo qaabeeyey xayawaano kala duwan.
Ma taqaanaa? Marka ugu horeysa isticmaalka biraha muraayadaha ah ee abuurista sawirro cagaaran ayaa lagu dabaqay 1962-ka Maraykanka Disneyland. Kuwani waxay ahaayeen sawirro kartoonada sawirrada.
Sidoo kale waxay u egtahay bonsai qurux badan oo sanduuq ah. Si loo abuuro bonsai, waxaa lagama maarmaan ah in la jarjiyo caleemaha iyo caleemaha yaryar ee hoose ee bustaha sanduuqa. Isticmaal xadhig, waxaad ku dabooshaa qaybta khafiifka ah ee asalka khafiifka ah xagasha 45 darajo, sameynta godka geed.
Caleemaha sare ee la jarjaray maqaayad ah qaab kubad ama dhibic. Si aad u abuurto laan la jilay oo leh silig, u sii qaab dhismeedka lagama maarmaanka u ah, iyo inaad xagaliso xaglaha rabitaanka adigoo xajinaya dheriga.
Xadhiggu waa inuu ku jiraa geedka aan ka badnayn 7 bilood. Haddii aan la saarin, ka dibna wuxuu ku kori karaa koontada. Ka dib markii ay ka soo saareen silig ka soo leexatay lafdhabarta, kobaca waxay sii socon doontaa jihadaas.
Ka dib marka la dhamaystiro timo, bonsai waa in lagu shubaa weel gaar ah. Si aad tan u samayso, ku shub 2 daqiiqo oo qoyan oo ku jirta weelka hoostiisa, waxaannu ka soo qaadnaa dhirta dushiisa, nadiifinta xididdada dhulka iyo iyaga jarjar maqnaashaha, ka tago qaybta saddexaad.
Marka xigta, meel warshad ku dheji weel cusub oo lagu seexdo dusha sare ee substrate. Waxaa loo diyaariyey dhoobo, humus iyo ciid oo ah saamiga 1: 2: 2. Substrate-ka waxaa lagu dabooli karaa gabal dhoobo ah. Waxay ku hayn doontaa qoyaanka dhirta oo waxay ku siineysaa muuqaal ah sheeko. Waraabinta waa in la sameeyaa 4ta maalmoodba mar.
Ma taqaanaa? Taageerada waxaa loola jeedaa farshaxanka muuqaalka ah, nuxurka kaas oo ah in la sameeyo qaababka qurxinta ee geedaha iyo geedahooda iyadoo la adeegsanayo timo. Boxwood waa ujeeddo ujeedadan. Beeraleyga Knei Matius, oo ku noolaa qarnigii 1aad ee BC, waa awoowiin farshaxan ah.
Waa wakhti aad ku ogaan kartid markaad dib u celiso sanduuqa. Guri da 'yar oo ka yar da'da 4 sano waxay u baahan tahay qaliin sannadle ah. Dhar cusub waa inaysan noqon mid aad u ballaaran marka la barbardhigo mid hore, haddii kale waxay u horseedi doontaa dib u dhac ku yimaada koritaanka warshadda oo laga yaabo inay burburiso.
Waa muhiim! Haddii aad sameysey bonsai of boxwood, ka dibna badanaa lagama maarmaan in la beerista, si aanay u dhaawici cayayaanka la sameeyay. Transplantation waxaa lagu samayn karaa hal mar 10 - 15 sano.
Nidaamyada taranka qoryaha gudaha
Si aad u fahamto sida tubaakada dib loogu dhejiyo guriga, waxaa muhiim ah in la ogaado siyaabaha dhalashada - gooynta iyo abuurka. Kuwa ugu caansan waa bararid. Ka feker sidii aad u kori lahayd sanduuqa naftaada.
Hawlgalku waa la qabadsiiyaa bisha Agoosto - Sebtembar. Wixii tan, gooyn la jarjarey geed leh ilaa 9 cm dheer iyo laba internodes ah. Raadinta waqti dheer ayey qaadataa. Si aad u dardar geliso nidaamkan adoo isticmaalaya phytohormones iyo kuleylka ciidda.
Dheriga beeritaanka waa inuu lahaadaa lakabka dheecaankiisa. Wixii koritaanka dhirta wanaagsan, waxaa lagama maarmaan ah in lagu diyaariyo ciidda laga soo bilaabo isku-dar ah caleemaha cagaaran, dhulka baaxad leh iyo ciid aan qalafsaneyn oo ah saamiga 2: 1: 1.
Habka dhalmada ee isticmaalaya abuurka ayaa ah mid shaqeynaya.
Si arrintan loo sameeyo, miraha bislaado waxaa lagu qooyay biyo leh kiciyaha kobaca hal maalin. Kadibna waxaa lagu beeray dhar si toos ah, oo lagu daboolay dhamaadka kale ee dharka iyo boogta duubka. Xirmooyinkaan waa in lagu hayaa mar walba qoyaan (ma qoyaan) ilaa bil kahor illaa sprouts caddaan ah.
Waa muhiim! Marxaladda muhiimka ah ee taranta taranka abuurka - dhafan. Tani waa qotodheerta xaaladaha jiilaalka dabiiciga ah ee miraha geedka la dhigo si loo hagaajiyo geedo. Waxaa lagu sameeyaa qaboojiyaha.
Ka dib markii biqilka, abuur ah lagu beeray in isku dar ah oo ah peat iyo ciid ee tiro isku mid ah, iyo weelka waxaa lagu xiray filim ah. Caleemaha waa inay soo muuqdaan ugu dambeyn saddex toddobaad, ka dib markii filimka laga saaro. Geedo guga beeray dhulka.
Daryeelka aan haboonayn ee geedka ayaa saameynaya tayada qurxinta ee dhirta. Waraabinta xad dhaafka ahi waxay ka qayb qaadataa ciribtirka nidaamka xididka, ku buufinta si aan caadi ahayn - qallajinta caleenta, iyo heerkulka sare ee hawada xilliga qaboobaha - dhoobo caleenta.
Tan iyo caleemaha iyo laamihii sanduuqa waxaa ku jira alkaloids (maaddadani waa sunta cayayaanka ugu badan), liiska cayayaanka cunta dhirta maahan waqti dheer.
Cayayaanka qashinka ah waxaa ka mid ah gallitsa, caarada caarada, xajmiga.
Galitsa - waa cayayaanka. Waxay sameeyaa kobcinta on afkoda iyo dogob ee sanduuq, kaas oo geedi socodka dhalmada iyo koriinka dirxiga cayayaanka dhacdaa. Dirxiga ayaa ku quudinaya dheecaanka caleemaha, iyaga oo keenaya inay isku laabmaan.
Ma taqaanaa? Apitsidia Gallitsa waxaa loo adeegsadaa si dabiici ah oo lagu koriyo si loo ilaaliyo dhirta koraya ee laga soo saaro aphids.
Si looga hortago dhirta in ay soo gaarto cayayaankaan, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo wax beerto caafimaad leh markaad beerto. Iyadoo jabinta baahida loo qabo in la gooyo oo la gubo caleenta waxyeeloobay, iyo dhirta waxaa lagu daaweeyaa fungicides.
Caarada caarada - cayayaan caadi ah oo dhirta gudaha ah. Iyada oo ay sabab u tahay in lagu xoqdo unugyada leh cayayaan iyo jaqaan jeexjirta dhirta ku dul saaran, dhibco yaryar oo huruud ah ayaa u muuqda caleemaha.
Sida qiyaas ka hortag ah, warshad kasta oo ka muuqda gurigaaga waa in ay ka soo baxdo karantiilka ka hortagga udub-dhexaadka. Ticks waxay si fiican ugu dhuftaan cimilada kulul, oo qallalan, sidaa daraadeed waa lagama maarmaan in la buufiyo xayawaanka iyo qolka hawo.
Marka laga soo tago kiimikada, caarada caarada ayaa saameeya biyo lagu qulqulo, daaweynta laydhka ultraviolet, daaweynta khamriga caleemaha.
Shchitovka - Cayayaanka ayaa ka duwan midba midka kale in jidhkoodu uu daboolo gaashaan. Cayayaanka waxay ku fadhiisanayaan geedka xuubka, caleemaha caleemaha oo nuugaan casiirka. Saameynta shchitovki ee sanduuqa ah waxaa lagu gartaa adkaanta caleemaha, muuqaalka kore ee dhibco huruud ah. Hababka ka hortagga iyo xakamaynta waa isku mid sida caarada caarada.
Waa dhib badan tahay in lagu xaliyo dhibaatada cudurrada beeraha iyo daaweynta.. Cudurada saameyn kara sanduuqa sanduuqyada waa xoqida necrosis. Waxaa lagu gartaa geerida darafka caleemaha iyo samaynta dhibco ku yaal caleemaha.
Haddii aad eegto qaybta laanta bukaanka, waxaad arki kartaa xakamaynta korteha iyo wareegyada mugdiga ah. Hab wanaagsan oo loola tacaalo cudurku waa inuu gooyo laamaha jiran. Tani waxay siin doontaa wareega hawada iyo iftiinka iftiinka. Iska yaree laamaha gubanaya, iyo dhirta waxaa lagu daaweeyaa fungicides oo ku salaysan baker ama baaruud.
Haddii sanduuqgu uu noqdo huruud jiilaal ka dib jiilaalka, waxaa laga yaabaa inay jiraan saddex sababood, maaddaama ay calaamaduhu aad isku mid yihiin. Tani waxay noqon kartaa necrosis xabbad, barafoob oo laamood dhalinyaro ah oo ka dhalatay fadhiisin, ama duuf dabayli ah oo baadiyaha ah..
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la gooyo laamaha la jajabiyay lana shaqeeyo fungicide iyadoo lala socdo xayiraadaha koritaanka qaar si ay u taageeraan dhirta. Cilmi-baaris dheeri ah ayaa lagu samayn karaa shaybaarada adoo eegaya joogitaanka necrosis.
Sidoo kale sanduuqa dhuunta ayaa saameyn kara kansarka. Si loola dagaallamo cudurka, waxaa lagama maarmaan ah in la jarjiro qaybta saameysa ee baadiyaha ah si loo helo qoryo caafimaad qaba oo loo daweeyo nabarka Fundazol.
Kordhinta iyo daryeesha sanduuqa, waxaad ku heli doontaa farxad weyn. Waxay ka ilaalin doontaa gurigaaga bakteeriyada waxayna abuureysaa raaxo.